Posted by Fros April 21, 2018
ဒါကြောင့် မကစားခင်မှာ သိထားသင့်တာလေးတွေ ဖတ်ထားရင် ကစားတဲ့အခါ အထစ်အငေါ့မရှိ ပိုပြီး ကစားရကောင်းသွားမှာမို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေ စုစည်းပြီး ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ် ။ စုစုပေါင်း အချက် ၁၁ ချက်ရှိပါတယ် ။
အခုထွက်ရှိထားတဲ့ God of War ဟာဆိုရင် သူ့အရင် စီးရီးတွေနဲ့ လုံးဝမတူပဲ ဂိမ်းတည်ဆောက်ပုံက ကွဲပြားနေပါတယ် ။ ဂိမ်းအစပိုင်းမှာတော့ linear ဖြစ်လို့ ဒီနေရာသွား ဒီနေရာလာ စသဖြင့် ဇာတ်လမ်းအရ သွားခိုင်းတဲ့နေရာကလွဲလို့ တခြားနေရာတွေ သွားလို့မရအောင် ကန့်သတ်ထားပေမယ့် Lake of Nine ကို ရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ optional area တွေအများကြီး တွေ့လာရမှာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ် ကြိုက်သလို ကြိုက်တဲ့နေရာကို စူးစမ်းသွားလာလို့ ရလာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအချိန်ရောက်ရင် အဓိကဇာတ်လမ်း ကို ဆက်ကစားချင်တယ်ဆိုလည်း ဆက်ကစားနိုင်သလို optional area တွေကို စူးစမ်းသွားလာချင်တယ်ဆိုလည်း ရတာမို့လို့ ဒီ optional area တွေကို အချိန်ယူပြီး အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ စူးစမ်းလေ့လာသွားလာဖို့ အကြံပြုပါရစေ ။ စူးစမ်းသွားလာရင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိလာရမယ့် item တွေ crafting resource တွေ equipment တွေက အရမ်းကောင်းတာမို့လို့ အချိန်ကုန်ရကျိုးနပ်မှာပါ ။ ဒီ optional area တွေမှာ side quest တွေအပြင် အဓိကဇာတ်လမ်း နဲ့မပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ story အခွဲတွေ in game rewards တွေ အများကြီးရှိပါတယ် ။ ဟုတ်တာပေါ့ ။ side quest တွေက သင့်ကို တိုက်ခိုက်ခိုင်းမယ် ။ ဒီ့အတွက် XP တွေ အများကြီးပေးမယ် ။ XP တွေက skill tree က ထူးခြားတဲ့ abilites တွေ ပွင့်စေမယ် ။ ဒီအရာတွေအားလုံးက main story မှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေမှာပါ ။ God Of War ရဲ့ အဓိက ဇာတ်လမ်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာ သေချာပေမယ့် ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ side content လေးတွေ သိရရင် God of War ဇာတ်လမ်းအရသာက ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားမှာမို့ optional area တွေကို အချိန်ယူ စူးစမ်းလေ့လာဖို့ မမေ့စေချင်ပါဘူး ။
2> နေရာစုံ ထောင့်စုံအောင် စူးစမ်းသွားလာပါ
စူးစမ်းသွားလာမယ်ဆိုရင် နေရာစုံအောင် သွားပြီး နေရာတိုင်း နေရာတိုင်း စေ့စပ်သေချာစွာ သွားကြည့်ပါ ။ treasure chest တွေ အများကြီးရှိတာတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် တချို့ treasure chest တွေက မထင်မှတ်တဲ့နေရာတွေမှာ ရှိတတ်လို့ ကျန်ရစ်တတ်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ Runic chest တွေ ရှာတွေ့ခဲ့ရင် အရယူဖွင့်ဖို့ လုံးဝ မမေ့ပါနဲ့ ။ ဒီ Runic chest တွေမှာ performance enhancing item တွေဖြစ်တဲ့ Idunn Apples တို့ Horns of Blood Mead တို့ ရှိပါတယ် ။ ဒီ item တွေဟာ Kratos ရဲ့ maximum health နှင့် Spartan Rage meter တွေ တိုးစေပါတယ် ။ treasure chest တွေ runic chest တွေ ဖွင့်ဖို့ အခက်တွေ့နေခဲ့ရင် ဒီ chest တွေ ရှိတဲ့ အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကို စေ့စေ့စပ်စပ်လေး ရှာဖွေ စူးစမ်းကြည့်လိုက်ပါ ။ အဖြေက အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတတ်တာမို့လို့ပါ ။
3> Quick Turn ကို သုံးဖို့ မမေ့ပါနဲ့
တခါတလေ တိုက်ပွဲမှာ တိုက်ရင်း ကိုယ့်အနောက်မှာ ရန်သူရှိမှန်းမသိပဲ ဘယ်ကနေ ချခံထိလို့ ချခံထိမှန်းမသိ သေသွားတတ်တဲ့အခါ ရှိတတ်ပါတယ် ။ မြင်ကွင်းကျယ်တဲ့ third person view ပေမယ့် ရန်သူတွေ များတဲ့အချိန် နောက်ကျောဘက်ကို မမြင်ရတတ်တဲ့ အချိန်မျိုးဆို Quick Turn သုံးဖို့ လိုပါတယ် ။ Quick Turn ကို သုံးရင် ထိန်းဖို့ နဲနဲ ခက်ပေမယ့် ကိုယ့်ကျောနောက်ကို ရန်သူရောက်နေတဲ့ အခါမျိုးဆို အတော် အသုံးဝင်ပါတယ် ။ နဂို Quick Turn ခလုတ်နေရာက သတိမထားမိရင် ၂ ချက်နှိပ်မိတတ်ပါတယ် ။ Quick Turn ၂ ချက် ဆက်တိုက်နှိပ်မိရင် အရှေ့ကို တစ်ချက်ရှောင်လိုက်ပေမယ့် နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်မူလရပ်နေတဲ့ နေရာကို ပြန်ရောက်လာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တခါတလေမှာ အခက်တွေ့စေတတ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် God of War ဂိမ်း စမကစားမီ Quick Turn ခလုတ်နေရာကို ကိုယ်နှိပ်လို့ သင့်တော်မယ့်နေရာကို ကြိုတင်ပြောင်းထားသင့်ပါတယ် ။
4> Runic ability ကို ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပြုပြင်ယူပြီး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင် လုပ်ပါ
သမရိုးကျ တိုက်ကွက်နဲ့ combo တွေကို လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ရန်သူအလိုက် သုံးသလို Runic Attack ကိုလည်း သုံးဖို့ မမေ့သင့်ပါဘူး ။ Runic Attack ကတော့ အတော်လေးကြမ်းပြီး လက်နက်မှာ ထည့်လို့ရပြီး သူ့ကို ထုတ်သုံးချင်ရင် L1 ကို ဖိထားရင်း R1 သို့ R2 ကို တွဲနှိပ်ပေးရပါတယ် ။ Light နှင့် Heavy ဆိုပြီး Runic Attack ၂ မျိုး ၂ စားရှိပါတယ် ။ attack power ကို XP သုံးပြီး တိုးမြှင့်လို့ ရပါသေးတယ် ။ ၂ မျိုးလုံး တော်တော်အစွမ်းထက်ပါတယ် ။ တိုက်ကွက်တွေက ရန်သူ အလဲထိုးနိုင်သလို တခါတလေ ကိုယ့် HP နည်းနေတဲ့အခါမျိုး ရှုံးတော့မယ့်အခါမျိုးမှာ တချီတည်းနဲ့ အခြေအနေတစ်ခုလုံး ပြောင်းပြန်လှန်နိုင်လောက်အောင် အစွမ်းထက်ပြီး ပြင်းထန်ပါတယ် ။ Runic ၂ မျိုး အခြေအနေ အချိန်အခါအလိုက် ပြောင်းလဲ အသုံးချတတ်ဖို့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေပါစေ ။
5> Skill သေချာစွာ ရွေးပါ
ဂိမ်းကစားတာ ပထမအစ ၅ နာရီ ၆ နာရီ အထိကြာတဲ့အထိတော့ ရလာတဲ့ XP တွေက မဖြစ်စလောက်လေးတွေပဲ ရနိုင်သေးတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို လျှောက်သွားကြည့်သင့်သလို ဘယ် combat skill ကို အရင်ပွင့်အောင် လုပ်သင့်လဲဆိုတာ သေချာ စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အကယ်၍ သင်ဟာ ရန်သူအုပ်စုလိုက်နဲ့ တိုက်ခိုက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာ တိုက်ခိုက်ရကောင်းချင်ရင်တော့ Strom နှင့် Guardian Sweep က skill တွေ ပွင့်အောင် လုပ်တာ ကောင်းပါတယ် ။ damage အထွက် ကြမ်းချင်တာကို အဓိက တိုးမြှင့်ချင်ရင် Rage Combat tab အောက်က skill တွေ လိုက်ဖွင့်နိုင်ပါတယ် ။
အစပိုင်းမှာတော့ ပြေးမလွတ် ရှောင်မလွတ် အခန်းကျဉ်းတွေ သိပ်မများတာမို့ ဘယ် skill တွေက ကိုယ်ရဲ့ playstyle နဲ့ သင့်တော်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားရွေးချယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ မဖွင့်လိုက်ရတဲ့ skill တွေအတွက် စိတ်မပူပါနဲ့ ။ ဇာတ်လမ်းအလိုက် ကစားရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ skill အားလုံးကို ပွင့်အောင် ဖွင့်နိုင်မယ့် လုံလောက်တဲ့ XP တွေ တဖြည်းဖြည်းရလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
6> တိုက်ခိုက်ပုံစံကို ကိုယ်စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးပြီး တိုက်ခိုက်ပါ
တိုက်ခိုက်ရမှာ အသုံးပြုနိုင်မယ့် maneuvers တွေ အများကြီးကို skill tree မှာ ရှိနေတာ မြင်တွေ့ရမှာပါ ။ သုံးဖို့ အလောမကြီးပါနှင့် ။ skill တွေကို သေချာဖတ်ပြီး ဘယ်အခြေအနေမှာ ဘယ် skill သုံးတာ သင့်တော်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားယူပါ ။ ဥပမာ လျှပ်စီးလက်သလိုမျိုး တိုက်ခိုက်တာကြိုက်ရင် လျှပ်စီးလက်သလို လျင်မြန်တဲ့ တိုက်ကွက်တွေချည်း ရွေးသုံးတတ်ပါစေ ။ အကယ်၍ ရန်သူအခြေအနေ ကြည့်ပြီး တိုက်ကွက်တကွက်ထုတ်ဖို့ အချိန်ယူပြီး တိုက်ရတဲ့ အပြင်းစားတိုက်ကွက်တွေ တိုက်ရင် ပိုသင့်တော်မယ်ဆိုရင်လည်း damage အပြင်းစား skill တွေက သင့် အသုံးတော်ခံဖို့ အသင့်ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် God of War ဂိမ်းပလေးရဲ့ အခြေခံဖြစ်တဲ့ ခုခံတာ (guarding) နှင့် တဟုန်ထိုးရှောင်ပြေးတာ (dodging) ပိုင်နိုင်ထားဖို့တော့ လိုအပ်ပါမယ် ။
7> တိုက်ပွဲမှာ Atreus ကို ကောင်းကောင်း အသုံးချပါ
Atreus ဟာ ဇာတ်လမ်းအစပိုင်းမှာတော့ အင်အားသိပ်မရှိတဲ့ သာမာန် အဖော်တစ်ယောက်လို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းအလိုက်ကစားရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Atreus ဟာ အနီးကပ်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ နည်းစနစ်တွေ လက်နက်တွေ အသုံးပြုနိုင်လာတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Atreus ဟာ ရန်သူပေါ် ခုန်တက်ပြီး နောက်ကနေ ရန်သူ့လည်ပင်းကို ဆွဲညှစ်တာ လုပ်နိုင်လာပြီး ဒီ အပြုအမူတွေက Kratos ကို အနှောင့်အယှက်မရှိ တချက်တည်းနဲ့ ရန်သူကို အသေသတ်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ဖန်တီးပေးပါတယ် ။ Atreus ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကောင်းကွက်ကတော့ Light နှင့် Shock arrows ပါ ။ Shock arrows ကိုတော့ မကြာခဏ သုံးပေးသင့်ပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ shock arrows က ရန်သူကို အချိန်တခုကြာအောင် မလှုပ်ရှားနိုင်အောင် လုပ်ထားနိုင်လို့ပါပဲ ။
အကယ်၍ Kratos ဟာ တိုက်ခိုက်ရင်း ရန်သူတွေများလာပြီး ချောင်ပိတ်မိနေတဲ့ အခါမျိုးဆို Atreus ဟာ ရန်သူတစ်ဝက်ကို ဝေးရာကို မျှားခေါ်သွားပြီး Kratos ကို ကျန်တဲ့ရန်သူ အပြတ်ရှင်းနိုင်ဖို့ အချိန်ဆွဲပေးထားနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် ။ နောက်ပြီး Atreus က တချို့ရန်သူတွေရဲ့ powerful attack တွေကို ထုတ်နေဆဲ ကြားဖြတ်ဝင်ရောက် နှောင့်ယှက်ပြီး မထုတ်နိုင်အောင် တိုက်ခိုက်တတ်ပါသေးတယ် ။ ဇာတ်ရှိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှ Atreus မှာ ရန်သူအုပ်လိုက်ကို ကောင်းစွာ ထိန်းချုပ် တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ နည်းစနစ်တွေ skill တွေ ရှိတဲ့ Runic Summon ပွင့်သွားမှာမို့ နောက်ပိုင်း အုပ်စုလိုက်တိုက်ခိုက်ရတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ပိုလွယ်ကူလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
8> တိုက်ခိုက်ပုံစံရွေးပြီးလျှင် ထို တိုက်ခိုက်ပုံစံနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပြုပြင်ပါ
God of War ဂိမ်းသစ်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလွယ်တဲ့ ပုံစံ အများကြီးနှင့် Kratos ရဲ့ stats တွေကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ playstyle အလိုက် ပြုပြင်ခွင့်ပေးထားပါတယ် ။ armor နှင့် enchantment အလိုက် ပုံစံမျိုးစုံနှင့် Kratos ကို အသွင်အမျိုးမျိုး ပြောင်းနိုင်ပါတယ် ။ ဥပမာ Kratos ရဲ့ ရလာတဲ့ stat တွေကို strength နှင့် defense မှာ ထည့်ပြီး မြင့်တင်ခြင်းအားဖြင့် သမရိုးကျ Kratos ပုံစံ tank class အဖြစ် ထားထားနိုင်သလို Runic attack strength နှင့် cool-down timer stat တွေမှာ ထားတိုးမြင့်ခြင်းအားဖြင့် Battle mage မှော်ဆရာတစ်ယောက် အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ် ။ ဘယ် playstyle နှင့် သင်နဲ့ လိုက်သလဲ? ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ playstyle အလိုက် သေချာရွေးပြီး တိုးမြင့်တတ်ပါစေ ။
9> Armor အသစ် ဝတ်တိုင်း Enchanment တွေကို ပြန်ထည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့
ဇာတ်လမ်းတစ်လျှောက် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ armor အကောင်းစားတွေ ရှာတွေ့လာမှာ ဖြစ်သလို ဝယ်ယူလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ armor အသစ်ရရင် စမ်းပြီး ဝတ်ကြည့်ချင်စိတ် ဖြစ်လာမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် armor နဲ့ enchanment က တွဲထားတာမို့ armor အသစ်ဝတ်တိုင်း enchanment တွေ ပြန်ထည့်ရမယ့် အချက်ကိုတော့ မမေ့သင့်ပါဘူး ။
10> Yggdrasil Dew ကို အရယူပါ
လှေလေးစီးပြီး လျှောက်သွား စူးစမ်းလေ့လာရတဲ့ နေရာတွေမှာ တခါတလေ အလင်းရောင် ထွက်နေတဲ့ ပျံနေတဲ့ သစ်ကိုင်း (half-arched trees) တွေ တွေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပျံနေတဲ့ သစ်ကိုင်းလေးမှာ Yggdrasil dew လို့ခေါ်တဲ့ (item) ပစ္စည်းလေးရှိပါတယ် ။ ဒီပစ္စည်းက Kratos ရဲ့ stat တွေမှာ တစ်ခု ပေါင်းထည့်ပေးပါတယ် ။ strength, defense, vitality စတဲ့ stat တွေမှာပါ ။ ဒါကြောင့် အလင်းရောင်ထွက်နေတဲ့ ပျံနေတဲ့ သစ်ကိုင်းတွေ့ရင်တော့ မရအရ လိုက်ယူထားပါ ။
11> Muspelheim နှင့် Niflheim က စိန်ခေါ်မှု (challenge) ကို နိုင်အောင် ချပါ
နောက်ပိုင်းမှာ optional တွေဖြစ်တဲ့ Muspelheim နှင့် Niflheim ဆိုတဲ့ နယ်မြေ (realm) တွေ ရှာတွေ့လာပါလိမ့်မယ် ။ ဘာအကြောင်းလဲတော့ မပြောတော့ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဒီ နယ်မြေတွေထဲ ဝင်ပြီး စိန်ခေါ်မှုကို နိုင်အောင် တိုက်ပါ ။ နိုင်ခဲ့ရင် အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး armor ကို ပြုလုပ်နိုင်မယ့် crafting resource တွေ ရလာမှာမို့လို့ လုံးဝ လက်မလွတ်သင့်တဲ့ အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ ။
Reference = GameSpot: God of War (PS4) Guide: 11 Tips You Should Know Before Starting
Photos credit to GameSpot
God of War (PS4 Guide) မကစားခငျ သိထားသငျ့သော အခကျြမြား
အခု ထှကျတဲ့ God of War ဂိမျးကတော့ အရငျ့အရငျ စီးရီးတှနေဲ့မတူ အတျောလေး ကှဲပွားသှားပါပွီ ။ ပွနျလညျ ဆနျးသဈထားတဲ့ combat အသဈ၊ ဇာတျလမျးအသဈနှငျ့ feature အသဈ၊ mechanic အသဈတှနေဲ့ မို့ God of War ဖနျဟောငျးတှတေောငျမှ တခါတလေ မကျြစိလညျသှားစမေယျ့ ဂိမျးတဈခုပါ ။
ဒါကွောငျ့ မကစားခငျမှာ သိထားသငျ့တာလေးတှေ ဖတျထားရငျ ကစားတဲ့အခါ အထဈအငေါ့မရှိ ပိုပွီး ကစားရကောငျးသှားမှာမို့ သိထားသငျ့တဲ့ အခကျြလေးတှေ စုစညျးပွီး ဖျောပွလိုကျရပါတယျ ။ စုစုပေါငျး အခကျြ ၁၁ ခကျြရှိပါတယျ ။
1> Optional Area တှကေို အခြိနျယူပွီး စူးစမျးလလေ့ာ သှားလာပါ
အခုထှကျရှိထားတဲ့ God of War ဟာဆိုရငျ သူ့အရငျ စီးရီးတှနေဲ့ လုံးဝမတူပဲ ဂိမျးတညျဆောကျပုံက ကှဲပွားနပေါတယျ ။ ဂိမျးအစပိုငျးမှာတော့ linear ဖွဈလို့ ဒီနရောသှား ဒီနရောလာ စသဖွငျ့ ဇာတျလမျးအရ သှားခိုငျးတဲ့နရောကလှဲလို့ တခွားနရောတှေ သှားလို့မရအောငျ ကနျ့သတျထားပမေယျ့ Lake of Nine ကို ရောကျတဲ့အခြိနျကရြငျတော့ optional area တှအေမြားကွီး တှလေ့ာရမှာ ဖွဈပွီး ကိုယျ ကွိုကျသလို ကွိုကျတဲ့နရောကို စူးစမျးသှားလာလို့ ရလာတာကို တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ ။ ဒီအခြိနျရောကျရငျ အဓိကဇာတျလမျး ကို ဆကျကစားခငျြတယျဆိုလညျး ဆကျကစားနိုငျသလို optional area တှကေို စူးစမျးသှားလာခငျြတယျဆိုလညျး ရတာမို့လို့ ဒီ optional area တှကေို အခြိနျယူပွီး အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ စူးစမျးလလေ့ာသှားလာဖို့ အကွံပွုပါရစေ ။ စူးစမျးသှားလာရငျး ရှာဖှတှေရှေိ့လာရမယျ့ item တှေ crafting resource တှေ equipment တှကေ အရမျးကောငျးတာမို့လို့ အခြိနျကုနျရကြိုးနပျမှာပါ ။ ဒီ optional area တှမှော side quest တှအေပွငျ အဓိကဇာတျလမျး နဲ့မပတျသကျတဲ့ ထူးခွားတဲ့ story အခှဲတှေ in game rewards တှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ ။ ဟုတျတာပေါ့ ။ side quest တှကေ သငျ့ကို တိုကျခိုကျခိုငျးမယျ ။ ဒီ့အတှကျ XP တှေ အမြားကွီးပေးမယျ ။ XP တှကေ skill tree က ထူးခွားတဲ့ abilites တှေ ပှငျ့စမေယျ ။ ဒီအရာတှအေားလုံးက main story မှာ အထောကျအကူ ဖွဈစမှောပါ ။ God Of War ရဲ့ အဓိက ဇာတျလမျးက အကောငျးဆုံးဖွဈမှာ သခြောပမေယျ့ ဖုံးကှယျထားတဲ့ side content လေးတှေ သိရရငျ God of War ဇာတျလမျးအရသာက ပိုပွီး ပွညျ့စုံသှားမှာမို့ optional area တှကေို အခြိနျယူ စူးစမျးလလေ့ာဖို့ မမစေ့ခေငျြပါဘူး ။
2> နရောစုံ ထောငျ့စုံအောငျ စူးစမျးသှားလာပါ
စူးစမျးသှားလာမယျဆိုရငျ နရောစုံအောငျ သှားပွီး နရောတိုငျး နရောတိုငျး စစေ့ပျသခြောစှာ သှားကွညျ့ပါ ။ treasure chest တှေ အမြားကွီးရှိတာတှရေ့မှာ ဖွဈပမေယျ့ တခြို့ treasure chest တှကေ မထငျမှတျတဲ့နရောတှမှော ရှိတတျလို့ ကနျြရဈတတျပါတယျ ။ ပွီးတော့ Runic chest တှေ ရှာတှခေဲ့ရငျ အရယူဖှငျ့ဖို့ လုံးဝ မမပေ့ါနဲ့ ။ ဒီ Runic chest တှမှော performance enhancing item တှဖွေဈတဲ့ Idunn Apples တို့ Horns of Blood Mead တို့ ရှိပါတယျ ။ ဒီ item တှဟော Kratos ရဲ့ maximum health နှငျ့ Spartan Rage meter တှေ တိုးစပေါတယျ ။ treasure chest တှေ runic chest တှေ ဖှငျ့ဖို့ အခကျတှနေ့ခေဲ့ရငျ ဒီ chest တှေ ရှိတဲ့ အနီးအနားပတျဝနျးကငျြကို စစေ့စေ့ပျစပျလေး ရှာဖှေ စူးစမျးကွညျ့လိုကျပါ ။ အဖွကေ အနီးအနား ပတျဝနျးကငျြမှာ ရှိနတေတျတာမို့လို့ပါ ။
3> Quick Turn ကို သုံးဖို့ မမပေ့ါနဲ့
တခါတလေ တိုကျပှဲမှာ တိုကျရငျး ကိုယျ့အနောကျမှာ ရနျသူရှိမှနျးမသိပဲ ဘယျကနေ ခခြံထိလို့ ခခြံထိမှနျးမသိ သသှေားတတျတဲ့အခါ ရှိတတျပါတယျ ။ မွငျကှငျးကယျြတဲ့ third person view ပမေယျ့ ရနျသူတှေ မြားတဲ့အခြိနျ နောကျကြောဘကျကို မမွငျရတတျတဲ့ အခြိနျမြိုးဆို Quick Turn သုံးဖို့ လိုပါတယျ ။ Quick Turn ကို သုံးရငျ ထိနျးဖို့ နဲနဲ ခကျပမေယျ့ ကိုယျ့ကြောနောကျကို ရနျသူရောကျနတေဲ့ အခါမြိုးဆို အတျော အသုံးဝငျပါတယျ ။ နဂို Quick Turn ခလုတျနရောက သတိမထားမိရငျ ၂ ခကျြနှိပျမိတတျပါတယျ ။ Quick Turn ၂ ခကျြ ဆကျတိုကျနှိပျမိရငျ အရှကေို့ တဈခကျြရှောငျလိုကျပမေယျ့ နောကျတဈခကျြက ကိုယျမူလရပျနတေဲ့ နရောကို ပွနျရောကျလာမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ တခါတလမှော အခကျတှစေ့တေတျပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ God of War ဂိမျး စမကစားမီ Quick Turn ခလုတျနရောကို ကိုယျနှိပျလို့ သငျ့တျောမယျ့နရောကို ကွိုတငျပွောငျးထားသငျ့ပါတယျ ။
4> Runic ability ကို ကိုယျ့အကွိုကျနဲ့ ကိုကျညီအောငျ ပွုပွငျယူပွီး ရငျးနှီးကြှမျးဝငျအောငျ လုပျပါ
သမရိုးကြ တိုကျကှကျနဲ့ combo တှကေို လကျရှိရငျဆိုငျနရေတဲ့ ရနျသူအလိုကျ သုံးသလို Runic Attack ကိုလညျး သုံးဖို့ မမသေ့ငျ့ပါဘူး ။ Runic Attack ကတော့ အတျောလေးကွမျးပွီး လကျနကျမှာ ထညျ့လို့ရပွီး သူ့ကို ထုတျသုံးခငျြရငျ L1 ကို ဖိထားရငျး R1 သို့ R2 ကို တှဲနှိပျပေးရပါတယျ ။ Light နှငျ့ Heavy ဆိုပွီး Runic Attack ၂ မြိုး ၂ စားရှိပါတယျ ။ attack power ကို XP သုံးပွီး တိုးမွှငျ့လို့ ရပါသေးတယျ ။ ၂ မြိုးလုံး တျောတျောအစှမျးထကျပါတယျ ။ တိုကျကှကျတှကေ ရနျသူ အလဲထိုးနိုငျသလို တခါတလေ ကိုယျ့ HP နညျးနတေဲ့အခါမြိုး ရှုံးတော့မယျ့အခါမြိုးမှာ တခြီတညျးနဲ့ အခွအေနတေဈခုလုံး ပွောငျးပွနျလှနျနိုငျလောကျအောငျ အစှမျးထကျပွီး ပွငျးထနျပါတယျ ။ Runic ၂ မြိုး အခွအေနေ အခြိနျအခါအလိုကျ ပွောငျးလဲ အသုံးခတြတျဖို့ ရငျးနှီးကြှမျးဝငျနပေါစေ ။
5> Skill သခြောစှာ ရှေးပါ
ဂိမျးကစားတာ ပထမအစ ၅ နာရီ ၆ နာရီ အထိကွာတဲ့အထိတော့ ရလာတဲ့ XP တှကေ မဖွဈစလောကျလေးတှပေဲ ရနိုငျသေးတာ တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ ဘေးပတျဝနျးကငျြကို လြှောကျသှားကွညျ့သငျ့သလို ဘယျ combat skill ကို အရငျပှငျ့အောငျ လုပျသငျ့လဲဆိုတာ သခြော စဉျးစားရမှာ ဖွဈပါတယျ ။ အကယျ၍ သငျဟာ ရနျသူအုပျစုလိုကျနဲ့ တိုကျခိုကျရတဲ့အခါမြိုးမှာ တိုကျခိုကျရကောငျးခငျြရငျတော့ Strom နှငျ့ Guardian Sweep က skill တှေ ပှငျ့အောငျ လုပျတာ ကောငျးပါတယျ ။ damage အထှကျ ကွမျးခငျြတာကို အဓိက တိုးမွှငျ့ခငျြရငျ Rage Combat tab အောကျက skill တှေ လိုကျဖှငျ့နိုငျပါတယျ ။
အစပိုငျးမှာတော့ ပွေးမလှတျ ရှောငျမလှတျ အခနျးကဉျြးတှေ သိပျမမြားတာမို့ ဘယျ skill တှကေ ကိုယျရဲ့ playstyle နဲ့ သငျ့တျောမလဲဆိုတာ စဉျးစားရှေးခယျြဖို့ လိုအပျပါတယျ ။ မဖှငျ့လိုကျရတဲ့ skill တှအေတှကျ စိတျမပူပါနဲ့ ။ ဇာတျလမျးအလိုကျ ကစားရငျး တဖွညျးဖွညျးနဲ့ skill အားလုံးကို ပှငျ့အောငျ ဖှငျ့နိုငျမယျ့ လုံလောကျတဲ့ XP တှေ တဖွညျးဖွညျးရလာမှာ ဖွဈပါတယျ ။
6> တိုကျခိုကျပုံစံကို ကိုယျစိတျကွိုကျ ဖနျတီးပွီး တိုကျခိုကျပါ
တိုကျခိုကျရမှာ အသုံးပွုနိုငျမယျ့ maneuvers တှေ အမြားကွီးကို skill tree မှာ ရှိနတော မွငျတှရေ့မှာပါ ။ သုံးဖို့ အလောမကွီးပါနှငျ့ ။ skill တှကေို သခြောဖတျပွီး ဘယျအခွအေနမှော ဘယျ skill သုံးတာ သငျ့တျောမလဲဆိုတာ စဉျးစားယူပါ ။ ဥပမာ လြှပျစီးလကျသလိုမြိုး တိုကျခိုကျတာကွိုကျရငျ လြှပျစီးလကျသလို လငျြမွနျတဲ့ တိုကျကှကျတှခေညျြး ရှေးသုံးတတျပါစေ ။ အကယျ၍ ရနျသူအခွအေနေ ကွညျ့ပွီး တိုကျကှကျတကှကျထုတျဖို့ အခြိနျယူပွီး တိုကျရတဲ့ အပွငျးစားတိုကျကှကျတှေ တိုကျရငျ ပိုသငျ့တျောမယျဆိုရငျလညျး damage အပွငျးစား skill တှကေ သငျ့ အသုံးတျောခံဖို့ အသငျ့ပါပဲ ။ ဒါပမေယျ့ God of War ဂိမျးပလေးရဲ့ အခွခေံဖွဈတဲ့ ခုခံတာ (guarding) နှငျ့ တဟုနျထိုးရှောငျပွေးတာ (dodging) ပိုငျနိုငျထားဖို့တော့ လိုအပျပါမယျ ။
7> တိုကျပှဲမှာ Atreus ကို ကောငျးကောငျး အသုံးခပြါ
Atreus ဟာ ဇာတျလမျးအစပိုငျးမှာတော့ အငျအားသိပျမရှိတဲ့ သာမာနျ အဖျောတဈယောကျလို ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဇာတျလမျးအလိုကျကစားရငျး တဖွညျးဖွညျးနဲ့ Atreus ဟာ အနီးကပျတိုကျခိုကျနိုငျတဲ့ နညျးစနဈတှေ လကျနကျတှေ အသုံးပွုနိုငျလာတာ တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ ။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ Atreus ဟာ ရနျသူပျေါ ခုနျတကျပွီး နောကျကနေ ရနျသူ့လညျပငျးကို ဆှဲညှဈတာ လုပျနိုငျလာပွီး ဒီ အပွုအမူတှကေ Kratos ကို အနှောငျ့အယှကျမရှိ တခကျြတညျးနဲ့ ရနျသူကို အသသေတျနိုငျဖို့ အခှငျ့အရေး ဖနျတီးပေးပါတယျ ။ Atreus ရဲ့ အကောငျးဆုံး ကောငျးကှကျကတော့ Light နှငျ့ Shock arrows ပါ ။ Shock arrows ကိုတော့ မကွာခဏ သုံးပေးသငျ့ပါတယျ ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ shock arrows က ရနျသူကို အခြိနျတခုကွာအောငျ မလှုပျရှားနိုငျအောငျ လုပျထားနိုငျလို့ပါပဲ ။
အကယျ၍ Kratos ဟာ တိုကျခိုကျရငျး ရနျသူတှမြေားလာပွီး ခြောငျပိတျမိနတေဲ့ အခါမြိုးဆို Atreus ဟာ ရနျသူတဈဝကျကို ဝေးရာကို မြှားချေါသှားပွီး Kratos ကို ကနျြတဲ့ရနျသူ အပွတျရှငျးနိုငျဖို့ အခြိနျဆှဲပေးထားနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ ။ နောကျပွီး Atreus က တခြို့ရနျသူတှရေဲ့ powerful attack တှကေို ထုတျနဆေဲ ကွားဖွတျဝငျရောကျ နှောငျ့ယှကျပွီး မထုတျနိုငျအောငျ တိုကျခိုကျတတျပါသေးတယျ ။ ဇာတျရှိနျမွငျ့လာတာနဲ့အမြှ Atreus မှာ ရနျသူအုပျလိုကျကို ကောငျးစှာ ထိနျးခြုပျ တိုကျခိုကျနိုငျတဲ့ နညျးစနဈတှေ skill တှေ ရှိတဲ့ Runic Summon ပှငျ့သှားမှာမို့ နောကျပိုငျး အုပျစုလိုကျတိုကျခိုကျရတဲ့ အခါမြိုးတှမှော ပိုလှယျကူလာမှာ ဖွဈပါတယျ ။
8> တိုကျခိုကျပုံစံရှေးပွီးလြှငျ ထို တိုကျခိုကျပုံစံနဲ့ ကိုကျညီအောငျ ပွုပွငျပါ
God of War ဂိမျးသဈမှာ ပွုပွငျပွောငျးလဲလှယျတဲ့ ပုံစံ အမြားကွီးနှငျ့ Kratos ရဲ့ stats တှကေို ကိုယျကွိုကျတဲ့ playstyle အလိုကျ ပွုပွငျခှငျ့ပေးထားပါတယျ ။ armor နှငျ့ enchantment အလိုကျ ပုံစံမြိုးစုံနှငျ့ Kratos ကို အသှငျအမြိုးမြိုး ပွောငျးနိုငျပါတယျ ။ ဥပမာ Kratos ရဲ့ ရလာတဲ့ stat တှကေို strength နှငျ့ defense မှာ ထညျ့ပွီး မွငျ့တငျခွငျးအားဖွငျ့ သမရိုးကြ Kratos ပုံစံ tank class အဖွဈ ထားထားနိုငျသလို Runic attack strength နှငျ့ cool-down timer stat တှမှော ထားတိုးမွငျ့ခွငျးအားဖွငျ့ Battle mage မှျောဆရာတဈယောကျ အဖွဈကို ပွောငျးလဲလို့ရပါတယျ ။ ဘယျ playstyle နှငျ့ သငျနဲ့ လိုကျသလဲ? ကိုယျကွိုကျတဲ့ playstyle အလိုကျ သခြောရှေးပွီး တိုးမွငျ့တတျပါစေ ။
9> Armor အသဈ ဝတျတိုငျး Enchanment တှကေို ပွနျထညျ့ဖို့ မမပေ့ါနဲ့
ဇာတျလမျးတဈလြှောကျ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ armor အကောငျးစားတှေ ရှာတှလေ့ာမှာ ဖွဈသလို ဝယျယူလာနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ ။ armor အသဈရရငျ စမျးပွီး ဝတျကွညျ့ခငျြစိတျ ဖွဈလာမှာပါ ။ ဒါပမေယျ့ armor နဲ့ enchanment က တှဲထားတာမို့ armor အသဈဝတျတိုငျး enchanment တှေ ပွနျထညျ့ရမယျ့ အခကျြကိုတော့ မမသေ့ငျ့ပါဘူး ။
လှလေေးစီးပွီး လြှောကျသှား စူးစမျးလလေ့ာရတဲ့ နရောတှမှော တခါတလေ အလငျးရောငျ ထှကျနတေဲ့ ပြံနတေဲ့ သဈကိုငျး (half-arched trees) တှေ တှလေ့ာရမှာ ဖွဈပါတယျ ။ ဒီပြံနတေဲ့ သဈကိုငျးလေးမှာ Yggdrasil dew လို့ချေါတဲ့ (item) ပစ်စညျးလေးရှိပါတယျ ။ ဒီပစ်စညျးက Kratos ရဲ့ stat တှမှော တဈခု ပေါငျးထညျ့ပေးပါတယျ ။ strength, defense, vitality စတဲ့ stat တှမှောပါ ။ ဒါကွောငျ့ အလငျးရောငျထှကျနတေဲ့ ပြံနတေဲ့ သဈကိုငျးတှရေ့ငျတော့ မရအရ လိုကျယူထားပါ ။
11> Muspelheim နှငျ့ Niflheim က စိနျချေါမှု (challenge) ကို နိုငျအောငျ ခပြါ
နောကျပိုငျးမှာ optional တှဖွေဈတဲ့ Muspelheim နှငျ့ Niflheim ဆိုတဲ့ နယျမွေ (realm) တှေ ရှာတှလေ့ာပါလိမျ့မယျ ။ ဘာအကွောငျးလဲတော့ မပွောတော့ပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ ဒီ နယျမွတှေထေဲ ဝငျပွီး စိနျချေါမှုကို နိုငျအောငျ တိုကျပါ ။ နိုငျခဲ့ရငျ အကောငျးတကာ့ အကောငျးဆုံး armor ကို ပွုလုပျနိုငျမယျ့ crafting resource တှေ ရလာမှာမို့လို့ လုံးဝ လကျမလှတျသငျ့တဲ့ အပိုငျးတဈခုပါပဲ ။